Imaaraatka Carabta oo sameeyay iskudaygiisii ugu horreeyay ee uu kaga dego dayaxa. - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Imaaraatka Carabta oo sameeyay iskudaygiisii ugu horreeyay ee uu kaga dego dayaxa.
On Jul 20, 2020 136
Addis Ababa Jul 20,2020 (Hamle 13,2012 T.I) (FBC/SOMALI)-Dalka imaaraadka carabta aayaa iclaamiyay in uu wado isku daygiisii ugu horreyay ee uu ku tago meeraha Maaris ka dib markii si guul ah looga diray dayax gacmeed dalka Japan.
Rajadan ah in dayax gacmeed noociisu yahay H2-A laga diro xarunta dayax-gacmeedyada ee Tanegashima ee dalka Japan ayaa hadda lagu guulaystay ,kaas oo uu dayax gacmeedku gaadhayo masaafo dhan 500 Milyan KM islamarkaana loogu talogalay in lagu darso isbedelka cimilada ee meeraha(dayaxa).
Laba isku day oo hore oo lagu fuliyay(sameeyay) tijaabo Todobaaadkii la soo dhaafay ayaa la baajiyay cimilada oo xumayd awgeed.
Hergilida rajadan ayaa lagu in wadaa in ay ku beeganto bisha febraayo ee sannadka 2021-ka markaas oo uu dalka imaaraatka carabta uu xusayo sannad guuradii 50’aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay dalkaasi isku taga Imaaraatka Carabta(UAE).
Shiinaha oo ka cadhooday booqashada masuul sare oo maraykan ahi ku tagay Taiwan
kooxaha samatabixiyayaasha ee dalka Lubnaan ayaa weli wada dedaalo lagu baadigoobayo…
Shirkadaha Baraha Bulshada ee Facebook iyo Twitter oo tallaaabo isku mid ah ka qaaday…
Barta TikTok oo si adag uga jawaabtay eedaymihii Trump
Shiinaha oo ka cadhooday booqashada masuul sare oo maraykan…
kooxaha samatabixiyayaasha ee dalka Lubnaan ayaa weli wada…
Shirkadaha Baraha Bulshada ee Facebook iyo Twitter oo…